Mirror, Arts na Crafts Factory Supplier-SHUNDA - 5pcs ọnwa na-esetịpụ shelf osisi ọnwa okirikiri mgbidi shelf ndụ ime ụlọ ime ụlọ ihe owuwu ụzọ mbata party ọnwa eklips mgbidi ndozi shelf OEM na Factory | SHUNDA
5pcs ọnwa na-esetịpụ shelf osisi ọnwa okirikiri mgbidi shelf ndụ ime ụlọ ime ụlọ ihe owuwu ụzọ mbata party ọnwa eklips mgbidi ịchọ mma shelf
* Nabata ahaziri shelf osisi mgbidi ọ bụla *
MOQ bụ 1 ibe, nabata ahaziri ọ bụla Osisi Wall Shelf
Zuru oke maka ọtụtụ nka, nka na ọrụ ntụrụndụ. Mepụta onyinye zuru oke.
1.A zuru ezu nhazi ọnwa – Gibbous Nimbus mbụ gị Nhazi shelf nke ọnwa na-abịa n'usoro zuru ezu nke 5 (otu ọnwa zuru oke, ọnwa 2 na ọnwa abụọ na-ebelata).
2.These Moon Phase Wall Hanging bụ ihe mgbakwunye zuru oke na ụlọ ndị hụrụ ọnwa n'anya ma bụrụ nnukwu ihe ndozi ụlọ ime mmụọ!
3.A na-esi na osisi mee ihe ndị a, ha na-abịakwa dị njikere ịkwado na mgbidi tinyere template na-enyere gị aka itinye ha, ya mere ha kwụ ọtọ.
4.LARGE na mbara oghere - Gị ọnwa na-adọ shelf set na-abịa na 5 iberibe ma buru ibu karịa ndị ọzọ., Ị nwere ike dabara ọzọ kristal na tumble nkume na kristal ngosi shelf ihe ndozi.
5.A nnukwu ihe ndozi iji mee ka ụlọ gị dị mma, ọ nwere ike ịgbakwunye egwu egwu mara mma na gburugburu ebe obibi gị
MOQ 1sets, nabata nka na nka ọ bụla ahaziri
Nkwakọ ngwaahịa igbe nke ọ bụla + katọn
Nlereanya: Mgbidi n'usoro ọnwa
Ụdị nkwudo: Ịkọba ihe ịchọ mma
Ụdị: Northern Europe
Dayameta: 27cm mara na naanị ọnwa zuru oke bụ okirikiri zuru oke
Ụdị ndị ọzọ ihe ewu ewu na nso nso a
1.OEM & ODM, ọ bụla shelf nwere ike ahaziri na agba, size.
Shunda Home Decoration factory bụ ọkachamara na-ebu osisi nka na-enye mmepụta, imewe, ahịa na mgbe ọrịre maka ndị ahịa ụwa. Ụlọ ọrụ anyị na-elekwasị anya n'ichepụta na ịmepụta ụdị nkà na nka dị iche iche dị ka osisi shelf, igbe osisi, osisi azụ mirror, wdg. nke ọtụtụ-eji na ụlọ ọrụ ụlọ, ịzụ ahịa malls, supermarkets, ụlọ akwụkwọ, hotels oru ngo, anyị na-enye OEM na ODM azụmahịa ọrụ.
Ngwaahịa dị elu, asọmpi ọnụahịa na ọrụ kacha mma bụ ịchụso anyị n'akwụsịghị akwụsị. Nweta ahụmahụ na igbe mmepụta na mbupụ kwere nwere ike inye gị ezigbo imekọ ihe ọnụ experience. With novel arụmọrụ , diversified styles and thoughtful service , our products have winning the pralse and trust of our customers,Lee anya ozi gị na welcome na China.
Nke gara aga: New European style imewe ọla ọla nwere osisi ukpa nwere akwa lampshade table oriọna na oriọna ala nwere akwụkwọ 3C
Osote: Igbe osisi buru ibu nwere mkpuchi mkpuchi na ihu ihu maka nka, nka, ihe omume ntụrụndụ na nchekwa ụlọ.
5pcs nke ọnwa
5pcs ọnwa usoro tent
5pcs ọnwa na-esetịpụ shelf
5pcs setịpụrụ shelf
shelf nke ọnwa
Shelf osisi na-ese n'elu osisi...
Ugogbe ọnwa mara mma nke nwere...